Eke hutu nemubairo weBig Brother Naija | Kwayedza
Eke hutu nemubairo weBig Brother Naija
11 Oct, 2019 - 00:10	 2019-10-10T21:15:53+00:00 2019-10-11T00:05:31+00:00 0 Views
MERCY Eke ndiye akahwina mubairo mukuru wemuchirongwa cheBig Brother Naija 2019 icho chinobuda paDSTV zvakaita kuti ave mudzimai wekutanga kuhwina mumutambo uyu.
Akange ari makuwerere nemusi weSvondo wadarika apo Mercy akapihwa mubairo wake we60 miriyoni Naira mushure mekukunda dzimwe shasha dzaaikwikwidzana nadzo dzinosanganisira Mike, Frodd, Omashola naSeyi mumutambo uyu weBig Brother Naija Pepper Dem.
Pavashanu vakange vasara muimba iyi, Mike akapedza ari pechipiri, Frodd ari pechitatu kozoti Omashola ndiye aive ari pechina uye pechishanu paina Seyi.
Uyu wakange uri mwaka wechina wemutambo uyu.
Shasha dzemhanzi dzine mukurumbira dzekuNigeria dzinoti Tiwa Savage naM.I, Patoranking, Dj Obi naDj SSnatch ndivo vaitandadza veruzhinji pagungano rekupihwa kwemibairo iri.